HALATRA MOTO “BWS” Olon’ny Akany Père Pedro sy Manjakaray ireo tratra
Natosika hatrany Ambohimangakely ilay “BWS” an’ ny Manjakaray. Tovolahy miisa 4 izay 21 taona ny zandriny indrindra ary 31 taona ny zokiny, monina eny Manjakaray sy Manantenasoa Akany Père
Pedro, no voasambotry ny Polisy miasa ao aminy PPA Akamasoa ny alahady 29 Desambra teo tao
Ikianja Andralanitra tamin’ny 5 ora maraina. Polisy manao fisafoana teny an-toerana no nahatsikaritra ireto olon-dratsy ireto manosika moto marika «BWS» iray sady kaodikaody no hafahafa ny fihetsiny, tamin’iny faritra Manantenasoa Andralanitra iny. Narahin’ny ireto mpitandro filaminana ka teo Ikianja dia nisava ny anton-taratasy ny polisy. Saika handositra moa ny iray tamin’izy ireo teo am-pisavana ary teo no hitan’ ny polisy avy hatrany fa halatra ilay moto natosik’izy ireo. Noentina namonjy ny paositry ny Polisy avy hatrany hatao fanadihadiana ireo mpangalatra moto ireo. Tamin’ny fanadihadina dia nihaiky ny heloka vitany izy ireo ary avy any Manjakaray no nangalarany ity moto ity.
Araka ny tatitra amin’ny olona akaikin’i Mompera Pedro, tsy mitsitsy ireo mpangalatra ao amin’ireo
sahirana tezainy mihitsy io Relijiozy Lazarista io. Ity farany mihitsy no nangataka ny paositra ny polisy
eny an-toerana hanara-maso ireo amin’ny akaniny. Tsahivina moa fa efa im-betsaka notafihin’ireo
olona tezainy ny tobin’entan’ny Mopera eny amin’ny Akamasoa sy Manantenasoa. Tsy mahatsapa ny
soa atao azy ireo velomin’ity pretra teratany Arzantina ity fa toa mitaiza zana-baratra.